Itoobiya oo si Rasmi ah Ugu Dhawaaqday Dhameystirka Waddo Khad Tareen ah oo isku Xirta Adis Ababa iyo Jabuuti – Goobjoog News
Dowladda Itoobiya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dhameystirka dhismaha waddo tareen casri ah oo isku xiraysa magaalo madaxda Itoobiya ee adis ababa iyo dalka Djibuuti.
Khadkan tareen oo si rasmi ah howshiisa u bilaabi doonto toddobaadka ugu horreeya ee bisha October ee soo aaddan ayaa maalintii shalay xariga laga jaray.Tareenadan wadada isticmaalaya ayaa aad u dheereeya iyagoo saacadii jaraya xawaare dhan 120 Km.
Masuul u hadlay Itoobiya ayaa Waxa uu ka dhawaajiyay in awoodda tareenka ee rakaab uu yahay 3540 rakaab ah, oo loo kala qeybiyaya Labo qeybood oo kala heer sarreeya, qeybta koowaad tirada kuraasta waa 3944, qeybta labaad oo VIP ah waxay leedahay 2596 kursi, iyadoo sidoo kale-na uu la socdo makhaayad leh 944 kursi.
Khadkan tareenka ayaa dhirirkiisu waxuu gaarayaa 700km, iyadoo Itoobiya iyo Jabouti loo kala soconayo 6-8 saacadood oo qura. Waxaa mashuurcan ku baxaday lacag dhan 4Billon oo dollarka mareynka ah, dhismahan ay fulisay Labo shirkadood oo laga leeyahay wadanka China.
Itoobiya ayaa ku tiirsaneyd dekedaha wadanka Eritrea tan iyo markii uu dalkaasi xoriyadda ka qaatay Itoobiya 1991, basle sanadkii 1998 ayaa dagaal u dhaxeeya Itoobiya Eritrea oo dhacay dartii waxay itoobiya loo diiday isticmaalka dekedaha Eritrea oo ay badeecado kala soo degi jirtay, waxayna u wareegtay dhanka Djibuuti oo halkaas ay badeecadeeda ugu badan kala soo dagto hadda .
Maalintii Labaad Ee Ciidul Adxaa Oo Loo Dabaal Degayo
Guddiga Warfaafinta oo Xildhibaanada u sharaxay Qodobada ay Wax Ka Badaleen ee Sharciga Saxaafadda, Kuna Dhiirigaliyay Meel Marintiisa
Ban Ki-moon Oo Walaac Ka Muujiyay Rabshadaha Ka Socda Burundi
cialis..com weight loss cialis what age [url=https://xz-phar...
cialisgeneric cialis without a pescripton 200 mg cialis [url...
cialis no prerscription Stromectol buy cialis online cheap [...
buying viagra in the uk soft viagra buy viagra no prescripti...
cialis with dapoxetine buy cialis rush cialis for free [url=...